Akụkọ - Kedu ka esi ehicha ma na-echekwa arịa dị n'èzí?
1 Akwa efere dị ọcha
Mgbe anyị na-ehicha ma na-echekwa arịa ụlọ dị n'èzí, anyị ga-achọpụta ma ákwà efere ahụ ọ̀ dị ọcha na mbụ. Mgbe emechara ma ọ bụ hichapụ uzuzu, jide n'aka na ị ga-atụgharị ya ma ọ bụ jiri akwa efere ọhụrụ. Ejila akụkụ nke mere ruru unyi ugboro ugboro, ọ ga-eme ka ihe ruru unyi kpochie n'elu ngwá ụlọ ma mebie akwa akwa na-egbuke egbuke n'èzí kama.
2 Họrọ onye nlekọta kwesịrị ekwesị
Iji nọgide na-egbuke egbuke mbụ nke ngwá ụlọ, e nwere ụdị abụọ nke ngwaahịa na-elekọta ngwá ụlọ: ngwá ụlọ na-elekọta wax spray , ihicha na mmezi ihe. Ngwá ụlọ na-elekọta wax ịgba ihu ọma Aims na qualitative ihe dị ka ụdị nile nke woodiness, polyester, agba na ọkụ-àmà plastic osisi, na nwere dị iche iche ọhụrụ smells.Cleaning na mmezi gị n'ụlọnga adabara ụdị nile nke osisi, iko, sịntetik osisi. , karịsịa maka ihe ngwakọta nke ngwá ụlọ dị n'èzí. Ya mere, Họrọ onye nlekọta nlekọta kwesịrị ekwesị, nwere ike ịzọpụta oge dị oke ọnụ ahịa, na-emeziwanye mmetụta mmezi ahụ.
Tupu anyị ejiri ha mee ihe, ọ kacha mma ịkwanye ya nke ọma ma jide ya na ogo 45 ka enwere ike ịhapụ ọdịnaya nke ite ahụ n'enweghị nrụgide. Mgbe ahụ jiri nwayọọ fesaa akwa akwa akọrọ site na gburugburu 15 cm anya , ma hichaa ngwá ụlọ, nwere ike ịrụ ọrụ dị mma nke nhicha na mmezi.
3 Ezubere ihicha
Textilene : hichaa na akwa akwa etinyere na mmiri.
Tebụl osisi na oche: hichaa ya na akwa akwa, anaghị eji ihe siri ike ihicha, zere imebi oyi akwa mmiri.
PE rattan: enwere ike ihicha ya na ahịhịa dị nro, akwa akwa ma ọ bụ ihe na-ehicha ihe, gbochie nkukota na ncha na ndụmọdụ mma ma ọ bụ ihe siri ike. PE rattan nwere ike igbochi mmiri, mgbochi ịka nká, ihe akaebe ụmụ ahụhụ, ihe mgbochi infrared ray, yabụ na ị gaghị etinye nnukwu ego na mmezi.
Plastic : enwere ike ịsacha ya na ncha nkịtị, ṅaa ntị ka ị ghara imetụ ihe siri ike aka, ejila brush metal na-asa. Kwesịrị igbochi nkukota na n'ọnụ mma ma ọ bụ ọkọ ihe siri ike, ọ bụrụ na ọ na-agbawa, nwere ike ịrụkwa ya site na usoro mgbaze ọkụ.
Ọla: zere ịkụtu na ịcha oyi akwa mkpuchi mgbe ị na-ejizi; Akwụsịla n'elu ihe a na-atụgharị arịa ụlọ iji zere ebe mpịaji ahụ enweghị ọdịdị na mmetụta ejiri. Naanị jiri mmiri ncha na-ekpo ọkụ na-asachapụ, ekwesighi iji acid siri ike ma ọ bụ ncha alkaline siri ike dị ọcha, ka ọ ghara imebi oyi akwa na nchara.
4 Ndozi ngwá ụlọ dị n'èzí nke Rattan
4.1 Nlekọta kwa ụbọchị
Jiri akwa akwa dị nro dị ọcha na-ehicha elu ya ugboro ugboro, ma kpachara anya maka acid, kemịkalụ alkaline na mmanụ.
4.2 ọkụ akara
Ọ bụrụ na ihu lacquer na-ahapụ akara coke, nwere ike kechie akwa siri ike ọka dị mma n'osisi egwuregwu ma ọ bụ nha nha, techaa nwayọ nwayọ, besmear na-esote mkpa wax, akara coke nwere ike desalinate.
4.3 akara ọkụ
N'ozuzu, ọ bụrụhaala na ejiri mmanya, mmanụ ọkụ ma ọ bụ tii na-ehicha akwa efere. Ọ ga-akara gị mma imegharị elu elu ma ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepụ ya
Jiri crayon ma ọ bụ agba n'elu kpuchie ebe a kpughepụrụ, wee jiri obere ntu ntu na-egbuke egbuke maka nchebe.
4.5 akara mmiri
Na-ekpuchi akara ahụ na akwa akwa dị mmiri, wee pịa akwa efere ahụ nke ọma nke ọma ọtụtụ ugboro site na ígwè eletrik, akara ahụ ga-agwụkwa.
Oge nzipu: Jun-17-2021